Semalt विशेषज्ञ आन्तरिक SEO चुनौतिहरू पार गर्न W तरिकाहरू सुझाव दिन्छ
एसईओ परिवर्तन भएको छ जुन यो पहिले कसरी गरिएको थियो। आज, यो मुख्य रूपमा वेबसाइट सामग्री, उपयोगिता, र अधिकारमा आधारित छ। इन-हाउस एसईओ आधुनिक एसईओको अभिन्न हिस्सा हो। यो विशेषज्ञहरूको एक समर्पित टीम संग काम गरेर एक कम्पनी द्वारा हासिल एसईओ संचालन शामिल छ। यसमा वेब विकास टोली, पीआर टीम, सामग्री विकास टोली, मार्केटि team टीम, नाम रूपान्तरण अनुकूलन टीम समावेश छ तर केहि।
यी सबै टोलीहरू सँगै मर्ज गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। ती सबैको लक्ष्य र प्राथमिकताहरू छन्। इन-हाउस एसईओको भूमिका विभिन्न टोलीका मानिसहरूलाई समन्वय गर्न र उत्प्रेरित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको छ।
यद्यपि एसईओ मा भर्खरको परिवर्तन धेरै आवश्यक थियो, तिनीहरू धेरै चुनौतीपूर्ण छन्। विगतमा, इन-हाऊस एसईओ सानो काम गर्ने ठाउँमा काम गर्दै, भरीएको किवर्डहरू र ब्याकलि other्कहरू र अन्य कम-गुणवत्ता युक्तिहरूमा सामेल थियो। यी कार्यनीतिहरू काम गर्थे। खोजी ईन्जिनहरू अब पूर्ण रूपमा निर्भर छैनन् वेबसाइटहरू क्रमबद्ध गर्दा। रैंकिंग साइटहरूका लागि गुगलको एल्गोरिथ्मले आज सामग्रीको गुणस्तर, मार्कअप र पृष्ठ गति, सम्मानित लिंक सीमा, आदि जाँच गर्दछ।
Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक, इवान कोनोवालोभ, तीन मुख्य तरिकाहरू वर्णन गर्दछ जुन घर भित्रका SEO सँग सम्बन्धित छनौटहरू पार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
१. अगाडि योजना गर्दै
सफल हुनको लागि तपाईलाई योजना चाहिन्छ। तपाईंले प्रयोग गर्नुहुने रोडम्यापसँग सम्बन्धित सबै टोलीहरू प्रदान गर्नुहोस्। उनीहरूसँग निरन्तर कुराकानी गर्नुहोस् र उनीहरूबाट के आशा गरिन्छ जान्नुहोस्। एउटा योजनाले टोलीलाई बिभिन्न कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ र कुनै घटनाको लागि तयार हुन।
कार्यहरू निर्धारित समय भित्र प्राप्त हुन्छन्। यसले राम्रो सम्बन्ध राख्न पनि मद्दत गर्दछ किनभने सबैलाई थाहा छ उनीहरूबाट के आशा गरिन्छ।
२. एसईओ आन्तरिक रूपमा बेच्नुहोस्
संलग्न टोलीका प्रत्येक सदस्यलाई बुझ्नुहोस् कि एसईओको मुख्य भूमिका बिक्री गर्नु हो। उनीहरूलाई मुख्य फाइदाहरू बुझ्न दिनुहोस् जुन SEO ले तपाईंको कम्पनीमा ल्याउने छ। सम्पूर्ण परियोजनाको प्रभावको बारेमा संगठनलाई नकारात्मक सहित सूचित गर्नुहोस्। यदि टोली सदस्यहरूले परियोजनाको प्रभाव बुझ्छन् भने, उनीहरूले प्राथमिकतामा के समस्याहरू र प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक समाप्त गर्न आवश्यक पर्ने स्टाफको संख्या थाहा पाउनेछ।
Dep. निर्भरताको संख्या घटाउनुहोस्
प्रत्येक एसईओ अभियानमा केहि निर्भरता समावेश गर्दछ। तिनीहरूले अभियानको लक्ष्य पूरा गर्न मद्दत गर्दछ। जे होस्, निर्भरताको संख्या घटाउँदा कामको बोझ र बैठकको समय कम गर्न मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंको एसईओ परिणामहरूको गति पनि बढाउँदछ।
कुनै संगठन परिवर्तन गर्नको लागि वेबसाइट विकास टोलीहरू प्रयोग गर्ने संस्था कम रैंक्छ। तिनीहरू पनि धेरै स्रोतहरू प्रयोग गर्छन्।
मुख्य वेबसाइट चलाउन CMS छनौट गर्ने वेबसाइटहरू र ब्लगको लागि प्रकाशन फारम, जसले सामग्री विकासकर्ताहरूलाई विकास टोलीहरू प्रयोग नगरीकन सामग्री प्रकाशित गर्न अनुमति दिन्छ।
यदि तपाइँसँग तपाइँको संगठनको लागि इन-हाउस SEO अभियानको मुख्य कार्यकारी अधिकृतको रूपमा कुनै चुनौतीहरू छन् भने, आशा नगुमाउनुहोस्। यदि तपाईंले माथि छलफल गरिएका तीन बुँदाहरू समावेश गर्नुभयो भने, सबै कुरा ठीक हुनेछ। उनीहरूले कुनै पनी अवरोधहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईंले सामना गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको एसईओ प्रयासहरू सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।